I-china yangaphandle into eluncedo ekufumaneni into esongwayo inqwelo yomvelisi kunye nomthengisi | URuiyi
Inqwelo yangaphandle yokuSebenza yokuSonga engenakukwazi ukuSonga
Imoto yokuqala yesixhobo sokukhetha ngaphandle kwinqwelo yokuSonga engenakukwazi ukuSonga, efanelekileyo, efanelekileyo nesebenzayo. ukhuselo lokusingqongileyo.
Kulula ukuthutha: inokuhlanganiswa ngemizuzwana, akukho ndibano ifunekayo! Ingasongwa ibhegi ukuze igcinwe lula. Ubungakanani obuncinci, obulungele ukubeka ikhabethe, udonga okanye isiqu sayo nayiphi na imoto esemgangathweni. Imoto eluncedo yokuwa ilungele ukuthungatha uyokuthenga, ukuphuma usapho okanye njenge trolley yemveliso, ilungele ukuhamba, ukuhamba, iholide, igadi, ipaki, inkampu, ivenkile yokutya, umyezo wezilwanyana, imisebenzi yezemidlalo yangaphandle okanye nje izinto ezihambayo.
Isixhobo sokuqala sokhetho semoto Inqwelo yangaphandle yokuSebenza yokuSonga engenakukwazi ukuSonga, efanelekileyo, esebenzayo nesebenzayo. ukhuselo lokusingqongileyo.
Kulula ukuthutha: inokudityaniswa ngemizuzwana, akukho ndibano iyafuneka! Ingasongwa ibhegi ukuze igcinwe lula. Ubungakanani obuncinci, obulungele ukubeka ikhabethe, udonga okanye isiqu sayo nayiphi na imoto esemgangathweni. Imoto eluncedo yokuwa ilungele ukuthungatha uyokuthenga, ukuphuma usapho okanye njenge trolley yemveliso, ilungele ukuhamba, ukuhamba, iholide, igadi, ipaki, inkampu, ivenkile yokutya, umyezo wezilwanyana, imisebenzi yezemidlalo yangaphandle okanye nje izinto ezihambayo.
Iimpawu zibandakanya: izibambo ezihlengahlengiswayo ukuze kube lula ukuphatha, kunye nabanini beekomityi ezi-2 zokuqinisekisa ukhuseleko lwesiselo
Ukuhamba okufanelekileyo-kufanelekile kakhulu ukuphatha izixhobo ukuya kwiminyhadala yezemidlalo yangaphandle, iikonsathi, ukhenketho lwepaki, olulungele ukusetyenziswa ekhaya. Nceda uqaphele ukuba ayifanelekanga ukuhambisa abantwana.
Tyhala okanye utsale:izibambo ezinokurhoxiswa kunye neziphatho ezinokutshintshwa ziyafumaneka kukhetho lwakho. Kukulungele kakhulu ukusetyenziswa egadini, ukuphuma kosapho okanye njengetroli yempahla yorhwebo, kulunge kakhulu ukuya elunxwemeni, inkampu, iminyhadala yezemidlalo yangaphandle kunye nawo nawuphi na umsitho ocinga ukuba kufanelekile.
Ishenxisi eshenxisekayo kunye nebhasikidi yangemva. Isilingi esususwayo siyakukhusela izinto zakho kwimvula nakweyiphi na imitha yelanga. Ibhasikiti yangemva yenza ukugcinwa kube lula ngakumbi.
Uyilo lomntu:esi sithuthi sinamavili amane sineziqhoboshi ngaphambili nangasemva ukulawula ukuhamba kwaso xa sityhalwa okanye sitsalwa. Ukuphakama kwetreyila kunokufikelela kwii-intshi ezingama-44 (malunga ne-111.76 cm), ukuvumela ukuba uyirhuqe kakuhle.
Ukusonga ngokukhawuleza kunye nokugcina: icompact yoyilo, esongiweyo kubungakanani be-mini, ungasonga ngesandla esinye; yonga ixesha kunye nendawo, efanelekileyo ukuhambisa zonke iimfuno zakho zegadi.
Isiphatho Adjustable: ngesiphatho adjustable, ukuba ujikeleze kakuhle ngokweemfuno; isiphatho asiyi kuwa phantsi, kwaye ukuphakama kuya kutshixwa ngamalungu; akukho sidingo sokukhathazeka malunga nenqwelomoya engalawulekiyo.
Ephathekayo, yokugcina indawo: inokugoqwa kuyilo oluhambelanayo kwaye ifakwe kwityesi ehamba nayo ukuze igcinwe kwitraki yemoto okanye kugcino.
into No CW02
Izinto eziphathekayo Isinyithi kunye ne-polyester eyi-600D
Ubungakanani 67 × 41 × 46cm
Ubungakanani bokusonga 46 × 17cm
Ukupakisha 1pc / isikhwama
into No CW03
Ubungakanani bokusonga 76x30x20cm
Ilaphu 600D oxford
Izinto eziphathekayo Ityhubhu yentsimbi
UPaclomg Soze 30x20x76cm
Ilogo Logo ngentando
Le mveliso inokusetyenziswa kumathuba amaninzi okuphumla angaphandle, njengokuya epakini kwipikniki, ukuya kuphumlo lwangaphandle kunokusetyenziselwa ukuhambisa ukutya, amanzi, ukuhambisa njalo njalo. Yiya ekupeyinteni ebaleni, ukuzonwabisa, njl njl.nokusetyenziselwa ukupakisha izinto eziyimfuneko, ezilula ukuzisebenzisa.Le nqwelo ilungele uhambo oluya kwimarike, ipaki, ulwandle, iminyhadala yezemidlalo, inkampu, nokunye okuninzi!
Abathengi ngokubanzi babonisa ukuba isiphumo sokusetyenziswa silungile, ukusebenza ngokulula, ukufakelwa okufanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu.
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wokulayisha ulungiso lweemoto
Isithuthi sokuzonwabisa sangaphandle
DB Ivili, I-China i-PU Foam Isondo, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Ivili likaCaster, Isondo le-China PU, Umxube weKhonkrithi yase China,